Itoobiya oo la Wareegtay hogaanka AMSIOM – Radio Daljir
Febraayo 1, 2019 6:48 b 0
Dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horreysay ku guuleysatay in ay hoggaamiso howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee lagu Magacaabo AMISOM.
Gen. Tigabu Yilma Wondimhunegn oo kasoo jeedda Itoobiya ayaa si rasmi ah ula wareegay hoggaanka Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ka dib Munaasabad Kooban oo ka dhacday Xeradda Ciidanka AMISOM ee Muqdisho.
Waxaa uu xilka kala wareegay Lt. Gen. Jim Beesigye Owoyesigire oo shaqeynayay tan iyo bishii Janaayo 2018.
Francisco Caetano Madeira, Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee Soomaaliya (SRCC),ahna madaxa AMISOM ayaa sheegay in ay tahay Markii ugu horreysay taliye ka socda Ciidanka Itoobiya lagu wareejiyo Hoggaanka Guud ee AMISOM.
Tigabu waxa uu ciidamada itoobiya ka tirsanyahay 34 sano wuxuuna ka soo shaqeeyay qeybo kala Duwan oo ciidmada ah oo ay ka mid yihiin Qeybta, Takhaatiirta, Batroolka, iyo Taliyaha Guud.
“Hawlgalku waa mid aad u weyn, laakiin aad baan ugu kalsoonahay in aad samayn kartid, oo aad leedahay Karti” ayuu yiri Madeira